Nohamafisina kosa anefa fa tsy azo atao fitadiavam-bola ny fandefasana an-kalamanjana ny sarin’ny TVM. Nivaha aloha izany ny olana ho an’ireo toerana tsy ahazoana mivantana ny TVM kanefa misy Canal+. Ho an’ireo tsy ahitana izany kosa, dia mitantara manontolo ny lalao ihany koa ny radiom-pirenena na ny RNM. Taorian’ny ady sahala 2-2 tamin’ny Syli National avy any Ginea ny sabotsy teo, dia andrasan’ny maro ny lalao manaraka hifanandrinan’ny Barean’i Madagasikara amin’i Burundi izay (resin’i Nizeria 1-0) ny alakamisy 27 jona izao ary aorian’izay dia hifandona amin’ny Voromaherin’i Nizeria ny 30 jona. Ao an-damosin’ny ekipam-pirenena ny Malagasy manontolo, izay mirary vokatra tsara ho azy ireo hahafaha-miakatra amin’ny dingana manaraka. Hita taratra hatrany amin’ny fomba fitantanana eto amintsika ilay fanapahan-kevitra mandroso mihevitra noho ny tsy fisian’ny jery lavitra.